Yuusuf C/qani Maxamuud Xaaji Fiqi oo lagu dilay Dalka Siiriya - iftineducation.com
iftineducation.com – Wiil uu adeer u ahaa Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ka bar bar dagaalamayay dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Suuriya ayaa ku geeriyooday dagaalo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Kobane ee xadka Suuriya iyo Turkiga ku dhow.
Aabaha dhalay wiilkan oo lagu magacaabo C/qani Maxamuud Xaaji Fiqi oo ku sugan degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, ayaa wareysi uu siiyay Idaacada Al-Andulus ee ku hadasha Afka Shabaab waxaa uu ku xaqiijiyay in 21-kii bishan lagu soo wargeliyay in wiilkiisa uu ku shahiiday dagaalada Suuriya.
“Wiilkeyga, isagoo yar ayaa hooyadiisa ay ka waday dalka sanadkii 1993, 1996 Kenya ayuu ka baxay Mareykanka ayaa loo waday, wuxuu halkaas ka dhigtay iskuul, markii dambe diinta ayuu u go’ay Dugsi quraan ayuu macalin ka ahaa, muddo lix bilood ka hor ayuu Suuriya aaday, aniga waa ley soo sheegay, 21 bishan ayuu ku shahiiday dagaalkii Suuriya”ayuu yiri Aabaha dhalay wiilkan.
Wiilkan oo lagu magacaabo Yuusuf ayaa ka yimid magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo isagoo yar la geeyay, waxaana uu ka mid ahaa dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo bilihii la soo dhaafay ku biiray Kooxda ISIS ama Daacish.
Sidoo kale wiilkan ayaa waxaa loo yaqaanay magaca Maxamed Miski iyo Abuu Yuusuf, waxaana uu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qori jiray afkaartiisa, iyadoo muddo 12-jeer laga xiray bartiisa.
Wargeyska New York Times ayaa qoray in wiilkan uu bishii Agosto ee sanadkii 2008-dii uu ka tagay magaalada Minneapolis, isla markaana uu aaday Soomaaliya, xilligaasoo uu ku biiray Al-Shabaab, isagoo mar dambe dib ugu soo laabtay Mareykanka oo uu uga soo gudbay Suuriya.
Wiilkan ayaa bishii Janaayo ee sanadkan ku qoray bar uu ku lahaa Twitter-ka “Wadnaheyga wuxuu yaallaa Shaam, Indhaheyguna waxay eegayaan Masjidul Aqsa, Nafteyduna waxay jirtaa Soomaaliya”
Kooxda Daacish ayaa waxaa horay ugu biiray dhalinyaro badan oo Soomaali ah, kuwaasoo ay waalidiin u ahaayeen Siyaasiyiin caan ka ahaa Soomaalida, waxaana ka mid ahaa wiil uu dhalay Feysal Cali Waraabe oo ahaa Gudoomiyaha Xisbiga UCID, wiil uu adeer u ahaa Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Saacid, kuwaasoo horay uga soo muuqday muuqaalo.
Obama oo ka hadlay Go’aan geesinimo leh ay qaadatay Shirkada Sony